Ukulimala kukaSibisi yikhona okuqhathe i-Arrows nenduku - Impempe
Ukulimala kukaSibisi yikhona okuqhathe i-Arrows nenduku
UMandla Ncikazi nabadlali bakhe kwiGolden Arrows
Umqeqeshi weLamontville Golden Arrows uMandla Ncikazi uphoqelekile ukwamukela ukuthi uthola isibhaxu okwesibili kule sizini kwazise uzivumele yena ukuthi ukulimala kukakaputeni uNkosinathi Sibisi kubakhubaze emoyeni.
Lokhu kwenzeke ngoLwesibili iBlack Leopards iba yiqembu lesibili kule sizini ukuguqisa Abafana Bes’thende kwiDStv Premiership.
Amagoli amabili kaMohammed Anas – okukhona nalishaye esikhathini sikanondweba, sekusele amanennjana umdlalo uphele – yiwona awinise iLeopards obekungokokuqala iqeda umdlalo ngaphandle kwenduku kweyithupha yeligi.
UPule Mmodi obekuwusuku lwakhe lokuzalwa ukhishwe ngekhadi elibomvu lapho i-Arrows ebisikhombisa khona izimpawu zokubuya ngamandla.
UMichael Gumede ushayele i-Arrows elokubika ekhaya ngesithende maphakathi nesiwombe sesiibili.
“Mubi lo mphumela kodwa-ke akukho esingacasha ngakho. OUkulinyalelwa uSibisi umdlalo uqala ngakho kodwa kusiphazamise kwasiqeda.
“Kuthe noma sesifake uShitolo (Gladwin) saqhubeka nokuhluleka ukuwina amabhola amade (abeshaywelwa u-Anas). Nalawa awela ukuthi angathathwa noma ubani besingawawini.
“Besihluleka ukuliqala emuva ibhola okuyiyona indlela esihlasela ngayo. Beziningi nje izinkinga kulo mdlalo wanamuhla.
“Uma unezinkinga eziningi kangako emdlalweni nakanjani uzoba nenkinga,” usho kanje lo mqeqeshi iqembu lakhe elisanda kuwina i-Q2.
Ukuphoqa kwesimo ukuthi uSibisi ashintshwe umdlalo uqala, uNcikazi ubona kuyilowo mzuzu odwebe indlela ebizothathwa yilo mdlalo.
“Kushaye kwezwela ukulimala kukaSibisi umdlalo uqala futhi angikholwa ukuthi sike saphinde saphaphama kulokho.
“Angazi noma izinhliziyo bezigxile ekucabangeni ukuthi ulimele kakhulu, kodwa bekunalokho nje. Ngijabule ukuthi kuthiwa uyalulama. Akukubi njengoba bekubukeka,” kuchaza uNcikazi.
Yize ewamukela lo mphumela uNcikazi uveze ukuthi mhlawumbe bekufanele ukuze abadlali bezokhumbula ukuthi abazona izinsimbi.
“Esiwombeni sesibili besingcono futhi negoli lokulinganisa silithole kusifanele. Inkinga ibuye ngesikhathi sekuphuma ikhadi elibomvu (engingazange ngiliqonde).
“Uma sekunjalo-ke ugcina ungasaqondi noma kufanele uvale emuva, bese uvele ulwele iphuzu noma uqhubeke uzame ukuwina.
“Kukhona okungcono ebesingakwenza ukugwema igoli lika-Anas lesibili kodwa libe lihle kakhulu. Mhlawumbe besikudinga lokhu ukuze sizokhumbula ukuthi asizona izigora ezihlula wonke umuntu.
“Sizofunda kulokhu sivuke sizithintithe sibheke umdlalo olandelayo neBaroka FC,” kusho yena.
Previous Previous post: Ilahlwe yinhlanhla iChiefs iphikelwa igoli koweCAF
Next Next post: Akambalanga kulokhu ‘umakhwapheni’ ebonga abamesekile u-Anas weLeopards